Isitudiyo esingaphandle kwebhokisi silindelwe entliziyweni yeSaarland. Ngokungena ngasese kunye nokufikelela ngaphandle kwenyathelo ufikelela ekungeneni nge-cloakroom kumgangatho ophantsi we-bungalow yethu entsha, eyakhiwe ngo-2019. Emva koko uza kwigumbi lokuhlala elidityanisiweyo kunye negumbi lokulala elinebhedi yebhokisi yanamhlanje (1.60 x 2.00) kunye nekhitshi elimangalisayo. . Igumbi lokuhlambela elineshawa likumgangatho ophezulu kwaye lifakwe ngokumnandi - ukuze ukuhlala kwakho nathi kungaphezulu nje kokuthi "Kulungile"!
Kwiimitha ezingama-30 zesikwere uya kufumana yonke into oyifunayo ngokuhlala kwakho. Indawo yethu iyancomeka ngendlela yayo yoshishino, esekwe kwishishini lemigodi yaseSaarland. Ukongeza kwishawari yemvula, ukufudumeza okuphantsi komhlaba kunye nokulawulwa kwendawo yokuhlala yokungena umoya iqinisekisa intuthuzelo egqibeleleyo kwimpilo yakho. I-kitchenette edibeneyo ifanelekile ukulungiselela izitya ezincinci. Isixhobo sikwabandakanya umatshini wekofu we-capsule, iketile, i-2-fold ceramic hob, i-toaster, i-microwave kunye nefriji enendawo yesikhenkcisi.
Igumbi lokuhlambela labucala elineshawa yamanzi emvula lidibanisa kwigumbi lokuhlala.
Indlu yethu ibekwe ePüttlingen-Köllerbach kwindawo ezolileyo ye-de-sac. Kuhambo lwemizuzu embalwa ukuya kumbindi wedolophu. Kukho iivenkile zokutyela kunye nee-pubs, ikhefi kunye neemarike zokutya.
Imyuziyam yewotshi yaseSaarland kunye neNqaba yaseBucherbach ebuyiselweyo kunye neMartinskirche ngamangqina ale mihla embali yakudala kwaye zikufuphi nendlu yethu. Ixesha lokuqhuba ukuya eSaarbrücken naseSaarlouis limalunga nemizuzu engama-30, ukuya eVölklingen ukuya kwilifa lenkcubeko lehlabathi malunga nemizuzu eli-10.
Sisoloko sikulungele ukukwamkela. Sihlala endlini kwaye ungasifumana ngoWhatsapp, i-email okanye ngomnxeba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Püttlingen